သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက် ခရီးမထွက်မီ သင့်ကား ကျန်းမာရေးအတွက် စစ်ဆေးသင့်သည်များ
သင့်ကား အင်ဂျင်ရဲ့ အသက်သွေးကြောလိုဖြစ်တဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင် ညစ်နေပြီလား၊ အင်ဂျင်ဝိုင်ရဲ့ အဓိက အရည်အသွေးဖြစ်တဲ့ စေးကပ်မှု အရည်အသွေး (viscosity) ကျနေပြီလား ဆိုတာ ခရီးမသွားခင် စစ်ဆေးပြီးမှ သွားသင့်ပါတယ်။ ကားအင်ဂျင်ဝိုင်ကို 5,000 Km ကနေ 7,000 Km အတွင်းသာ အသုံးပြုသင့်ပြီး၊ ဒါ့ထက် ကီလိုမီတာ ပိုအသုံးပြုပါက အင်ဂျင်ဝိုင်ရဲ့ စေးပျစ်ခြင်း၊ အအေးပေးခြင်း၊ ချောဆီအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း အစရှိတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေ လျှော့နည်းလာပြီး သင့်ကားအင်ဂျင်ကို ဒုက္ခပေးမှာ မလွဲမသွေပါ။
ဒီနေရာမှာ ကားအင်ဂျင်ဝိုင်လဲထားပြီး ကီလိုမီတာ 3,000 လောက်အသုံးပြုထားတယ်၊ 4,000 km လောက်အသုံးပြုထားတယ်၊ သတ်မှတ်ကီလို 5,000 မပြည့်သေးဘဲ တကယ်လို့ ခရီးသွားဖြစ်မယ်ဆိုရင် လဲရင်ကောင်းမလား၊ မလဲဘဲ ထားရင်ကောင်းမလားဆိုပြီး ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ခရီးသွားမယ်ဆို လဲသွားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ၊ ကားအင်ဂျင်တွင်း အစိတ်အပိုင်းတွေက ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်ရဲ့ထုထည်ပေါ်မှာ မှီခိုပြီး လည်ပတ်နေရတာပါ၊ ဥပမာ ကရိုင်း (crankshaft) နဲ့ ဘယ်ရင် (bearing) တွေဟာ သံ သံခြင်းပွတ်ပြီးလည်နေတာမဟုတ်ဘဲ၊ ဒီ သံတွေရဲ့ ကြားထဲမှာ ဆီထုပါးပါးလေးတည်ရှိပြီး အဲဒီဆီထုလေးပေါ်မှာ လည်နေရတာမလို့ ခရီးဝေးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ အင်ဂျင်ရဲ့မြင့်တက်လာမယ့်အပူရှိန်နဲ့ အရည်အသွေးကျလာတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင် တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာ အင်ဂျင် မပျက်စီးတောင် အင်ဂျင်တွင်း အစိတ်အပိုင်းတွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် အင်ဂျင်ဝိုင် အရည်အသွေးကို မဖြစ်မနေစစ်ဆေးသွားသင့်ပါတယ်။
၂။ အော်တိုဝိုင်လို့ခေါ်တဲ့ automatic transmission fluid တွေစစ်ဆေးပြီးပြီလား?
အော်တိုဝိုင်လို့ အခေါ်များတဲ့ automatic transmission fluid ကတော့ အင်ဂျင်ဝိုင်လို ခဏခဏ မလဲရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေတို့ ခရီးဝေးသွားမယ်၊ ကီလိုမိုင်အများကြီးမောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအော်တိုဝိုင်ဟာလည်း မဖြစ်မနေစစ်ဆေးရမည့် အချက်ထဲမှာပါပါတယ်။
အော်တိုဝိုင်တွေကိုတော့ 60,000 km ကနေ 100,000 Km အထိ အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ ကားကုမ္ပဏီတွေက သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ အော်တိုဝိုင်ဆီတွေ ကီလိုဘယ်လောက်အသုံးပြုထားပြီးပြီလဲ
(ကီလီုမှတ်တမ်းရှိမယ်ဆိုရင်) ကီလိုမှတ်တမ်း မရှိရင်လည်း အော်တိုဝိုင်အရောင်ညစ်နေပြီလားဆိုတာ စစ်ဆေးပြီး ခရီးမသွားခင် လဲလှယ်သွားသင့်ပါတယ်။
အော်တိုဝိုင်လဲတဲ့အခါမှာလည်း မိမိကားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အမျိုးအစားကို သေချာရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ATF type အမျိုးအစားလား၊ CVT အမျိုးအစားလားဆိုတာ သေချာရွေးချယ်ပြီးထည့်မှရပါမယ်။ တချို့မိတ်ဆွေတွေ မိမိ ဂီယာဘောက်ရဲ့ အမျိုးအစားကိုမကြည့်ဘဲ အော်တိုဝိုင်ဖြစ်ရင်ပြီးရော ထည့်လို့ ဂီယာဘောက်ပျက်စီးပြီး ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ ပြုပြင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရတာ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။
၃။ သင့်ကား ဘက်ထရီစစ်ဆေးပြီးပြီလား?
ခရီးသွားတဲ့ကားလေးတွေ အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက ဘက်ထရီအားကျပြီး ကားစက်နှိုးမရတာပါ။ ဒီလိုဖြစ်ရင် လမ်းခရီးမှာ ဘက်ထရီထောက်နှိုးရ၊ ထောက်ကြိုးရှာရ၊ ထောက်နှိုးမယ့် အကူဘက်ထရီအိုးရှာရနဲ့ အရမ်းဒုက္ခများပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် သင့်ကား ဘက်ထရီကောင်း/မကောင်း၊ ဘက်ထရီအိုးရဲ့ ပါဝါကျ/မကျ စမ်းသပ်သွားသင့်ပါတယ်။
ပုံမှန် ဘက်ထရီအိုးကောင်းတစ်လုံးရဲ့ voltage က 12.35 V လောက်ပျမ်းမျှရှိပြီး ကားစက် စစနှိုးလိုက်တဲ့ အချိန် starter motor ကို စဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ထိုးကျသွားတဲ့ ဗို့အား votlage drop က 11. V ကနေ 10. V ထိပဲဆင်းသွားတယ်။ ဒါက အားပြည့်နေတဲ့ဘက်ထရီအိုးကောင်းတစ်လုံးအတွက်ပါ။ ဒါကို digital multimeter နဲ့တိုင်းတာကြည့်လို့ရပါတယ်။ 11.V ကနေ 10.V အထိပဲ ဆင်းတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဘက်ထရီကို စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင် ခရီးသွားနိုင်ပါပြီ။ သင့်ကား လမ်းမှာ ဘက်ထရီဝပ်စရာ မရှိနိုင်ပါ။
အသုံးပြုထားတာအနည်းငယ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အိုးတွေကို တိုင်းတာကြည့်ရင်တော့ ကားစက် စနှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ 9.5V ကနေ 8.5V လောက်ထိ ဗို့အားထိုးကျသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို စိတ်ချလက်ချ အသုံးပြုနိုင်သေးတဲ့အဆင့်မဟုတ်တောင် အသင့်အတင့်သုံးလို့ရပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီလောက်ဆို ဘက်ထရီအိုးအားထိုးကျသွားတာမျိုးက ဖြစ်ခဲပါတယ်။
ကားစက်စနှိုးလိုက်တဲ့အချိန် သင့်ကားဘက်ထရီ ဗို့အားက 8V အောက်ဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့ ခရီးသွားဖို့ ဘယ်လိုမှ စိတ်မချရတော့ပါဘူး။ ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်တော့ အဆင်ပြေနေပြီး ကားစက်သတ်ရပ်နားပြီး ပြန်နှိုးချိန်မှာ ဘက်ထရီအားကျပြီး စက်ပြန်နှိုးလို့မရတဲ့ပြဿနာနဲ့ ကြုံတွေရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ခရီးမသွားခင် သင့်ကား ဘက်ထရီကို စစ်ဆေးသွားမယ်ဆို ကားစက်နှိုးမရတဲ့ ပြဿနာကနေ ကင်းဝေးနိုင်ပါတယ်။
၄ ။ ကားဒိုင်နမို စစ်ဆေးပြီးပြီလား ?
အရပ်ခေါ် ဒိုင်နမိုလို့ခေါ်လိုက်တာပါ။ တကယ်တော့ Alternator ပါ။ ကားတစ်စီးလုံးရဲ့ အဓိက အရေးပါတဲ့ လျှပ်စစ်စနစ်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အရာပါ။ ဒီအော်တာနေတာက ကားဘက်ထရီကို အားသွင်းပေးပြီး ကားမှာရှိတဲ့ ဆက်စပ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကို အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။
ဒီကား အော်တာနေတာရဲ့ အဓိက အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာက ကာဗွန်ဘရက် (carbon brush) တွေ ပွန်းစားပြီးတိုကုန်တာပါ။ ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆို အော်တာနေတာကနေ အားသွင်းစနစ်အပြည့်အဝ အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ သင့်ကားမောင်းနေရင်းကနေ ကားဒိုင်ခွက်မှာ ဘက်ထရီအိုးပုံ ချက်မီးလေး ထလင်းပြီး ကားစက်ထိုးရပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် သင်ခရီးမသွားခင် သင့်ကား အော်တာနေတာကနေ အားသွင်းစနစ်ကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးသွားသင့်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ ကားအော်တာနေတာတစ်လုံးရဲ့ voltage က 13.50 V ကနေ 14.50 V လောက်ထိ ပျမ်းမျှရှိပါတယ်။ ကားစက်နှိုးထားပြီး ဘက်ထရီမှာ တိုင်းတာလိုက်လို့ 13 V အောက်ကျနေတာ ဒါမှမဟုတ် 14.50 V ထက်ကျော်လွန်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ သင့်ကား အော်တာနေတာရဲ့ အားသွင်းစနစ် တစ်ခုခုပျက်ယွင်းနေပြီး ဖြုတ်စစ်ဆေးဖို့လို့နေပါပြီ။
ခရီးမသွားခင် ကား charging စနစ် ကောင်း/မကောင်းဟာလည်း ခရီးသွားနေစဉ် စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေဖို့ မဖြစ်မနေစစ်ဆေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါပဲလို့ တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
၅ ။ ကား fan motor တွေ ၊ ကား belt ကြိုးတွေ စစ်ဆေးပြီးပြီလား?
ကား fan motor နဲ့ belt ကြိုးတွေဟာ ခရီးထွက်မယ်ဆို မဖြစ်မနေစစ်ဆေးသင့်တဲ့ အချက်တွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ ခရီးထွက်ရင်း fan motor မကောင်းလို့ heat တက်လာရင် လမ်းမှာထိုးရပ်တဲ့ ကားတွေရှိသလို၊ ကားရဲ့ မိန်းမူလီနဲ့ ဆက်စပ်ထားတဲ့ belt ကြိုးတွေပျက်လို့ ရေလည်အုံ water pump မလည်နိုင်လို့ကား heat တက်လာတာတွေ၊ alternator ကြိုးပျက်လို့ ကား charging မဝင်တော့ဘဲ ကားစက်ထိုးရပ်တာတွေဟာ သေချာမစစ်ဆေးသွားဘူးဆိုရင် လမ်းခရီးမှာ ကြုံတွေနိုင်တဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတွေပါ။
ဒါကြောင့် ခရီးမသွားခင် ကား fan motor တွေ လည်တာမှန်ရဲ့လား၊ အသံတွေထွက်နေသလား၊ low speed ၊ high speed လည်ရဲ့လား၊ ကား belt ကြိုးတွေမှာ အက်ကြောင်းတွေ၊ ဆွေးမြေ့နေတာတွေ ရှိလားဆိုတာကို ကျွမ်းကျင်ဝပ်ရှော့တွေမှာ ပြသစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
၆။ ကားမီးတွေကောင်း/မကောင်း စစ်ဆေးပြီးပြီလား?
ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် အဓိကစစ်ဆေးသင့်တဲ့ အချက်တစ်ချက်က ကားမီးစနစ်တွေနဲ့ အချက်ပြစနစ်တွေပါ။ ကားမှာရှိတဲ့ အနိမ့်စ၊ အမြင့်စခေါ်တဲ့ low beam ၊ high beam တွေ၊ ဘယ်ညာ အချက်ပြမီးတွေ၊ ဘက်မီးခေါ်တဲ့ reverse gear မီးတွေ၊ ဘရိတ်မီးတွေ အစရှိတဲ့ ကားမီးစနစ်တွေ ကောင်း/မကောင်း စစ်ဆေးသွားသင့်ပါတယ်။ အမြန်လမ်းမှာ ကားတစ်စီးနဲ့တစ်စီး အချက်ပြမီးတွေရဲ့အရေးပါပုံကို ပြောပြစရာမလိုအောင် မိတ်ဆွေတွေ သိကြမှာမလို့ မမေ့မလျှော့ စစ်ဆေးသင့်တဲ့အချက်အနေနဲ့ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရပါတယ်။
၇။ ကား coolant ရေတွေကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးပြီးပြီလား?
ကားအင်ဂျင် အအေးပေးစနစ်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ ရေတိုင်ကီခေါ် radiator ထဲထည့်ရတဲ့ coolant ရေတွေလျော့နည်းနေလား၊ ယိုစိမ့်မှုတွေရှိနေလား၊ ရေတိုင်ကီအဖုံးလို့ခေါ်တဲ့ pressure cap တွေ ပျက်စီးမှုရှိနေလားဆိုတာတွေကို ခရီးမသွားခင် သေချာစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ကားရေတိုင်ကီ ရေလျော့နေတာ မသိဘဲ မောင်းမိလို့ ကား heat တက်၊ gasket ပျက်၊ အင်ဂျင်ပါပျက်စီးရတဲ့ အထိဖြစ်တဲ့ကားတွေအများကြီးပါ။ Pressure cap လေးပျက်တာ မလဲမိလို့၊ မသိလို့ လမ်းခရီးရောက်မှ ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ ခရီးစဉ်နှောင့်နှေး စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာတွေ မဖြစ်စေဖို့ မဖြစ်မနေ စစ်ဆေးသင့်တဲ့ အချက်အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးရပါတယ်။
၈။ ကားအောက်ပိုင်းဆက်စပ် အစိတ်အပိုင်းတွေ စစ်ဆေးပြီးပြီလား?
ကားတစ်စီးလုံးရဲ့ ဝန်ကို အဓိက ထမ်းရတဲ့ အောက်ပိုင်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကိုတော့ အထူးအလေးပေးအနေနဲ့ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ကားစီးတဲ့သူတော်တော်များများကတော့ ခရီးသွားမယ်ဆို ကားရဲ့ကျန်းမာရေးရော၊ လူရဲ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်ပါ ကားအောက်ပိုင်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ တိုင်းရော့၊ မိန်းလုံး၊ ဘောဂျွိုင့်၊ လင့်တွေ၊ ရှော့ဘားတွေ၊ ဘရိတ်ရှူး၊ ဘရိတ်ဆုံ၊ ဘရိတ်ဆီတွေ၊ ဘရိတ်ဒရမ်တွေ အစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသာမက တာယာသက်တမ်း၊ တာယာအခြေအနေ၊ တာယာလေပေါင် အစရှိတာတွေကိုပါ ဂရုပြုစစ်ဆေးလာကြပါပြီ။ ဒါတွေကို အထူးဂရုပြုစစ်ဆေးပြီး ကားရော လူရော အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့ ထပ်လောင်းသတိပေးပါရစေ။
၉။ ကားရဲ့ ရှေ့/နောက် wiper ရွက်တွေ ကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်
မဟာသင်္ကြန်အချိန်အခါအတွင်း ခရီးသွားမယ့် မိတ်ဆွေတွေ မေ့လျော့နေတဲ့ အချက်တစ်ချက်က ကားရှေ့/နောက် wiper တွေ စစ်ဆေးဖို့ပါ။ Wiper ရွက်တွေ ပွန်းစားနေမယ်၊ နေပူဒဏ်ကြောင့် မာကျောနေမယ်၊ ဆွေးနေမယ်၊ wiper motor တွေကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် ရေပတ်ကစားတဲ့ကြားထဲ ကားမောင်းမယ်ဆို ရှေ့/နောက်မြင်ကွင်း မရှင်းတာကြောင့် ကားမောင်းရတာ အခက်အခဲဖြစ်ပြီး ယာဉ်တိုက်မှု အန္တရာယ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင်္ကြန်ရက်တွင်း လည်ပတ်မယ့်ကားတွေအတွက် ရှေ့နောက် wiper ရွက်တွေကို မဖြစ်မနေစစ်ဆေးပြီး လဲလှယ်ပေးသင့်ပါတယ်။
၁ဝ။ ကားအင်ဂျင်အတွင်းခန်းနဲ့ ကားရှေ့ခေါင်းခန်း ရေမဝင်အောင် အထူးသတိပြုစေလိုပါတယ်
ကားအင်ဂျင်ခန်းထဲကို ရေမဝင်အောင် အထူးသတိပြုရမယ့်နေရာက ကားရဲ့ အသက်ရှူပေါက်နှာခေါင်းဖြစ်တဲ့ inlet ပေါက်ကိုပါ။ ကား inlet ပေါက်ကို လေစစ် air filter နဲ့တွဲစပ်ထားပြီး ကားတော်တော်များများရဲ့ inlet ပေါက်တွေဟာ ကားရဲ့ ရှေ့အင်ဂျင်ခန်း အနိမ့်ပိုင်းမှာ တည်ရှိပါတယ်။ သင်္ကြန်တွင်း ရေပတ်ကြမ်းတဲ့နေရာတွေ ဥပမာ မီးသတ်ပိုက်နဲ့ ထိုးတာမျိုးဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ အင်ဂျင်ခန်းထဲက inlet ထဲ ရေမဝင်အောင် ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် ကားဘောနပ်ဖွင့်မောင်းတာမျိုး မလုပ်ဖို့လည်း သတိပေးမှာကြားချင်ပါတယ်။ ကားအင်ဂျင်ခန်းထဲက inlet ထဲရေဝင်သွားရင် ကားအင်ဂျင်ထဲကို ရေတွေရောက်ကုန်ကာ ကားအင်ဂျင်ရဲ့ မီးလောင်ခန်းတွင်းမှာ hydrolock လို့ခေါ်တဲ့ ရေဝင်ခြင်းကြောင့် ကားပစ်စတင်နဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ connection rod တွေ ကျိုးကောက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကားအင်ဂျင်ချပြီး ပြုပြင်ရတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အခုနောက်ပိုင်း မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေရဲ့ အီလက်ထရောနစ်စနစ်တွေ၊ ကားကွန်ပျူတာဘောက်တွေဟာ ကားရှေ့အင်ဂျင်ခန်းနဲ့ ကားဒက်ရှ်ဘုတ်၊ ကားရှေ့ခေါင်းခန်းထဲမှာ တည်ရှိတာပါ။ ဒီနေရာတွေ ရေရောက်မယ်ဆို အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ပိုင်းတွေပျက်စီးတာ၊ ကားဝါယာရှော့ဖြစ်တာကနေ ကားကွန်ပျူတာ ဘောက်တွေပျက်စီးတဲ့ အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကားရှေ့ခေါင်းခန်း မှန်ဖွင့်မောင်းတာ၊ ကားဘောနပ် 'ဟ' မောင်းတာတွေမလုပ်ဖို့၊ သင်္ကြန်တွင်းလည်ပတ်တဲ့အခါမှာလည်း ကာရှေ့မှန်တွေ အတင်အချ ကောင်းမကောင်း၊ လုံခြုံမှုရှိမရှိ၊ မှန်လိုင်နာတွေ လုံမလုံ သေချာလေးစစ်ဆေးပြီး အထူးဂရုပြုသင့်ပါတယ်။
ဒီအထက်ပါ အချက်လက်တွေကို ဂရုပြုလိုက်နာပြီး သေချာစစ်ဆေးပြီးမှ ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေရဲ့ကားလေးရော မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ရော အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းပြီး ကားတစ်ခုခုချို့ယွင်းလို့ ခရီးစဉ်အတွင်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာများ မရှိနိုင်ပါကြောင်း စေတနာထား အကြံပြုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ခရီးသွားမယ့် မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံး အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းပြီး မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
သင်္ကြန်ရက်များအတွင်း ယာဉ်နံပတ် မပါရှိသောကားများနှင့် လိုင်စင်မဲ့ကားများကို တစ်ပါတည်းသိမ်းဆည်း၍ ထိရောက်စွာ ဖမ်းဆီးအရေးယူမည်
သင်္ကြန်မတိုင်မီ ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာ